Ma waxaad raadinaysaa caymis caafimaad oo qiimo jaban ama aan qiimo lahayn? Context link Waxaanu bixinaa qorshayaasha Medicaid. Context link Waxaan sidoo kale siinaa qorshayaal caafimaad oo loogu talagalay dadka qaba labadaba Medicaid iyo Medicare. Context link
Shaandhee Qorsheyaasha Context link
U Shaqaadhee Nooca Qorshaha Context link
Labada caymis ee loo qalmo Context link
Hubi u-qalmitaanka qorshooyinka u-qalmitaanka laba-geesoodka ah Context link
(Medicare - Medicaid) (Furaysa daaqada modelka) Context link
Tirtir shaandheeyeyaasha oo dhan
Xir Context link
Waxaa laga yaabaa inaad u qalanto qorshe caafimaad oo labajibbaaran haddii: Context link
Waxaad ka yar tahay da'da 65 oo waxaad u qalantay iyadoo lagu salaynayo naafo nimo ama xaalad kale oo gaar ah AMA waxaad tahay ugu yaraan 65 sano jir oo aad ka hesho Caawimo Dheeraad ah ama kaalmo dhanka gobolkaaga ah. Context link
Waxaad tahay muwaadin Ameerikaan ah ama deggane sharci haysta oo ku noolaa gudaha Mareykanka ugu yaraan shan sanno oo xiriir ah. Context link
Waxaad ku nooshahay aagga adeegga qorshaha. Context link
Kahor intaadan dooran qorshe caafimaad oo gaar ah oo labo geesood ah, dib u eeg shuruudaha caymiska Medicaid ee buuxa ama qaybta ah. Context link
Ma waxaad tahay 65 sano jir ama ka weyn laakiin uma qalantid? Ka hel Faa'iidada Medicare, Kaabista Medicare ama Qorshayaasha Dawooyinka Dawada ee UHCMedicareSolutions.com Context link
Qiimaha bishii: Context link $0.00* Context link
* Kharashkaagu waxa laga yaabaa inuu u hooseeyo ilaa $0, iyadoo ay ku xirantahay heerkaaga u-qalmitaanka Medicaid. Context link
Qorshahan caafimaadka ee laba-geesodka ah waxaa loogu talagalay dadka u qalma Medicaid iyo Medicare Qaybaha A & B (Asal ahaan Medicare). Context link
Qorshahan waxaa laga heli karaa gobolada soo socda:
Qorshahan waxaa laga heli karaa gobolada oo dhamaan. Context link
Iska diiwngali Qorshaha (Furaysa daaqada modelka) Context link
Eeg Faahfaahinta Qorshaha
Hubi u-qalmitaanka Context link (Furaysa daaqada modelka) Context link
Macaashyada & Sifooyinka
OTC+Cuntada Caafimaadka leh Context link
$125 bil kaarka prepaidka ah ee OTC iyo raashinka daboolan ee dukaanka ama onlaynka ah Context link
Caymiska Daawooyinka Dhakhtarka uu soo qoro: Context link
$0 lacag bixinta dawooyinka guud ee la caymiyay iyo magaca summada oo ay ku jiraan geynta guriga Context link
Daryeelka aragga joogtada ah Context link
Is diwaangeli Qorshaha (Waxay furtaa daaqada modal) Arag Faahfaahinta Qorshaha Hubi u-qalmitaanka Context link (Furaysa daaqada modelka) Context link
Apache, Coconino, Gila, Maricopa, Mohave, Navajo, Pinal, iyo Yavapai.
$175 bil kaarka prepaidka ah ee OTC iyo raashinka daboolan ee dukaanka ama onlaynka ah Context link
Gila, Maricopa, Pima, iyo Pinal.
Dooqa dhakhtarka Context link
Adeegyada Caafimaadka Dabeecadda
Maaraynta Daryeelka Context link
Waad dooran kartaa dhakhtarkaaga. And you get member empowerment services to help with daily activities that only UnitedHealthcare Community Plan offers.
Maricopa, Pima, iyo Pinal.
Visit UHCExchange.com (Wuxuu ku furmaa Qayb Cusub)
Waxaad dooratay inaad iska diiwaangeliso
Kahor inta aadan bilaabin, aan aragno in qorshahan laga heli karo baaqaaga boostada.
Raadi Baaqa Boostada
(Wuxuu ku furmaa Qayb Cusub)
Qorshahan hadda lagama helo Baaqa Boostada la geliyey.
Eeg qorsheyaasha Ku Jira Baaqan Boostada.
Qorsheyaasha loo qalmo ee labo geesoodka ah Context link
Waa maxay DSNP? Context link
Qorshe labo geesood ah waa nooc ka mid ah qorshaha caymiska caafimaadka oo loogu talagalay dadka haysta Medicaid iyo Medicare labadaba. Context link Qorshaha caafimaad ee laba geesoodka ah ayaa la shaqeeya qorshahaaga caafimaadka ee Medicaid. Context link Waad haysan doontaa dhammaan faa'iidooyinkaada Medicaid. Context link Inta badan qorshayaasha caafimaadka ee laba geesoodka ah waxay sidoo kale ku siinayaan faa'iidooyin iyo sifooyin ka badan kuwa aad ka hesho Medicare-ga Asalka ah. Context link Dhammaan waxad ku heli $0 oo khidmada qorshaha ah. Context link
Yaa u qalma? Context link
Waa inaad u qalantid labadaba Medicare iyo Medicaid ama aad u qalanto Medicare kafaaiideyste inaad u noqoto ama aad kujirto caymiska buuxa ee Medicaid ah mid ka mid qeybaha AR ee soo socda: Context link FBDE, QMB, QMB PLUS, SLMB PLUS. Context link
Goorma ayaad isdiiwaangelin kartaa?
Muddada Diiwaangelinta Sannadlaha ah ee Medicare (AEP) waxay dhacdaa sanadkii hal mar gudaha xilliga dayrta. Hadii aad u qalanto qorshaha labo geesoodka ah, ma ahan inaad sugto. Context link
Waxa laga yaabaa in aad isla markiiba isdiiwaangeliso haddii aad Context link
Tahay 65 oo si cusub ugu qalanto Medicare ama aad qabto naafonimo loogu qalmi karo Context link
Hawlgab noqonayso oo aad luminayso caymiskaaga hada jira Context link
Ka guurtay aagga adeegga qorshahaaga Medicare ee hada jira. Context link
Qabto xaalad dabadheeraatay sida sonkorowga ama wadna xanuun joogto ah. Context link
Hel faa'iidooyinka Medicaid. Context link
Cusbooneysintii Ugu Dambeysay: 05.18.2022 waqtiga 12:48 GALABNIMO CDT